‘सहमति गरेर चाँडै चुनावमा जान चाहन्छौँ’
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको नेताका रूपमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहमतिका लागि सरकारसँग पटक–पटक वार्तामा हुनुहुन्छ । मधेशी मोर्चाका तर्फबाट उहाँले नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग अनेक पटक वार्ता गर्नुभएको छ । उहाँले सहमतिका विभिन्न उपाय पहिल्याउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीनबाट फर्किनु भएपछि वार्ताका लागि तयारी अवस्थामा रहनुभएका ठाकुरसँग गोरखापत्रका पत्रकार सुरेशकुमार यादवले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीचको वार्ता के भइरहेको छ ?
पछिल्लो वार्ता (फागुन १०) निकै सकारात्मक रूपमा भएको र अब सहमति होला जस्तो छ नि, के हो यथार्थ ?
– वार्ता त सकारात्मक नै भएको हो तर त्यो परिणाममा देखिएको छैन । वार्तामा धेरै कुरा हुन्छन्, धेरै प्रतिबद्धता र विश्वासका कुरा आइरहेका हुन्छन् तर जबसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन, तबसम्म त्यसलाई हामीले सकारात्मक मान्दैनौँ । कोठाभित्र मात्र राम्रा–राम्रा कुरा गरेर हुँदैन । बाहिर पनि देखिने गरी कुरा हुनुप¥यो । हामीसँग मधेश आन्दोलनका क्रममा मारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, मृतकलाई शहीद, घाइतेलाई निःशुल्क उपचार, बन्दी रिहा गर्ने तीन बुँदे सम्झौता भएको थियो तर हालसम्म केही भएको छैन । खोई त्यो सम्झौता कार्यान्वयन भएको ? त्यसैले सहमति भयो भनेर मात्र हुँदैन, त्यो कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । हामीले यसपालि भनेका छौँ– सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दैनौँ, देखिने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
सहमतिका लागि के–के कुरा हुन्छ त बैठकमा ?
अहिले संसद्मा प्रस्तुत संशोधन विधेयकका चार विषयमध्ये तीन वटा तत्कालै पास गराउने र सीमाङ्कनलाई सङ्घीय आयोग बनाएर स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएलगत्तै टुङ्ग्याउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । यो प्रस्ताव मान्न तयार हुनुभएको छ त ?
– हामीले अहिलेसम्म त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेका छैनौँ तर प्रधानमन्त्रीले जे–जे भन्नुभएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन कसले रोकेको छ ? हामीले त रोकेका छैनौँ नि । यो अरू केही होइन, हामीलाई अल्झाउने र हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर गर्नका लागि सरकारले त्यस्तो गरेको हामीलाई लागेको छ । प्रधानमन्त्री आफैँले ल्याएको प्रस्ताव आफैँ किन कार्यान्वयन गराउन सक्नुहुन्न ? कसले रोकेको हो ? आफैँले गरेका प्रस्ताव पारित गराइयोस्, सहमति आफैँ अगाडि बढ्छ । त्यो नगरेर खाली वार्ता गर्ने र समय खेर फाल्ने काम मात्र सरकारबाट भएको हो ।
आयोगबाट सीमाङ्कन टुङ्ग्याउने कुरा आएको छ, त्यसमा तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ ?
– आयोगबाट नै सीमाङ्कनलाई टुग्याउनुपर्ने कुरा थियो भने सरकारले विधेयकका रूपमा संसद्मा किन लग्यो त ? प्रश्न यहाँ छ । सरकारले पहिला त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । सरकारले सीमाङ्कनसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा आफैँ लगेको हो, आज आफैँले त्यसलाई आयोगमार्फत टुङ्गो लगाउँछु भन्न सुहाउँछ ? अहिलेसम्म हामी संविधान संशोधन गरेर सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छौँ ।
चुनावको मिति घोषणा भइसक्यो, आन्दोलन पनि धेरै दिनदेखि भइरहेको छ, अब समाधानका लागि सरकार र मधेशी मोर्चा दुवै लचिलो हुनुपर्ने होइन ?
–तपाईं नै भन्नुस् अब हामी कति लचिलो हुने ? २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म हामी कति लचिलो भएर आएका छौँ विचार गर्नुस् त । हामीले एक मधेश एक प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलन गरेको सबैलाई थाहा छ । त्यो सहमति पनि भएको कुरा सबैलाई थाहा छ तर त्यो कार्यान्वयन भएन । अहिले हामी दुई प्रदेशमा झरेका छौँ । राज्य पुनःसंरचना उच्च स्तरीय आयोग र तत्कालीन संविधानसभा राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले पनि कञ्चनपुरदेखि झापासम्म दुई प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । चितवनको १३ वटा गाउँ पनि मधेश प्रदेशमै राखिएको थियो । मधेशका भूभाग मात्र छुट्याइदेऊ भन्दा पनि मानिँदैन, योभन्दा अरू लचिलो के हुने ? आजसम्म हामी नै लचिलो हुँदै आइरहेका छौँ, गुमाउँदै आइरहेका छौँ तर सरकार कहीँ लचिलो भएको छैन, बरु हामीमाथि गोली मात्र चलाइएको छ ।
संसद्मा पेस भएको विधेयक पास गराउने दायित्व मधेशी मोर्चाको पनि हो । त्यसका लागि तपाईंहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने होइन र ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले साथ दिइरहेको छैन नि ?
अहिले त तपाईंहरूले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो, संशोधन विधेयक पारित गराउन तपाईंहरूको समर्थन हुन्छ त ?
संविधानको धारा २७४ का सम्बन्धमा तपाईंहरूले गम्भीर रूपमा कुरा उठाउनुभएको छ, के छ त्यसमा त्यस्तो ?
यो सुधार भएपछि सीमाङ्कन पछाडि टुङ्ग्याउनेमा सहमति जनाउनु हुन्छ त ?
अहिले सहमतिको प्रमुख बाधक प्रतिपक्ष दल एमाले कि सरकार त ?
अहिलेसम्म तीन दलको बीचमा केमा कुरा मिलेको छैन ? संविधान निर्माणदेखि लिएर हरेक कुरामा तीन दलबीच कुरा मिलेको छ तर मधेशी मोर्चासँग सम्बन्धित आएको एउटा संशोधन विधेयकमा उहाँहरू किन अलग हुनुहुन्छ ? यसबाट प्रष्ट छ कि तीन दल आपसमा मिलेका छन् । एउटै डुङ्गामा तीन वटै सवार हुनुहुन्छ । तीन दलबीच सत्ताका लागि मात्र लडाइँ हुन्छ, अरू सबै विषयमा कुरा मिल्छ ।
मधेशी मोर्चाले त विशेष रूपमा एमालेलाई ‘टार्गेट’ गरेको छ, किन त ?
– हामी कसैलाई ‘टार्गेट’ गरेका छैनौँ । आफ्नो अधिकारका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ । हाम्रो कुनै पनि निर्णय वा दस्तावेजमा फलानो पार्टीलाई ‘टार्गेट’ गर्ने वा निषेध गर्ने भन्ने छैन तर हाम्रो सङ्घर्षको बाधक हुनेलाई कसरी सहेर बस्ने ? एमाले हाम्रो शत्रु होइन, अरू दल जस्तै त्यो दलसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ । कुराकानी हुन्छ, छलफल हुन्छ । एमालेले आफ्नो काम गरिरहेको छ, हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौँ ।
कुनै कारणले चुनाव भएन भने यसको दोष त मधेशी मोर्चालाई जान्छ नि ?
– हामी चुनावको विरोधी होइनौँ, चुनावका लागि हामीले पहिलेदेखि आवाज उठाएको हो तर हामीसँग भएका सहमति र प्रतिबद्धता पूरा गरिनुपर्र्छ भन्ने हो । हामीले चुनाव हुनुहुँदैन भनेका छैनौँ । हाम्रो माग पूरा गरेर चुनावका लागि बाटो सफा गर्न भनेका छौँ । हाम्रो माग जति छिटो पूरा हुन्छ, त्यति छिटो चुनावमा जान सक्छौँ । रह्यो कुरा दोषको । यसको दोष मधेशी मोर्चालाई किन जान्छ ? यो देशको जिम्मेवारी जसले लिएको छ, जसले हतार–हतारमा चुनावको मिति घोषणा गरेको छ, चुनाव गराउँछु भनेर कम्मर कसेर लागेको छ, त्यसलाई दोष जान्छ । हामी चुनावको बाधक कदापि होइनौँ, संविधान संशोधन जसले गर्दैन, त्यो नै चुनावको बाधक हुन्छ । बरु हामीलाई चुनावविरोधी देखाउने प्रयास भइरहेको छ । हामी काठमाडौँमा बसेर वार्ता गरिरहेका छौँ तर मधेशी जनता भन्छन् काठमाडौँ छाडेर आऊ । हामी आशावादी भएर त सरकारसँग वार्ता गरिरहेका छौँ नि । हामी चुनावको बाधक भएको भए यो बेला काठमाडौँ छाडेर मधेशमा बस्थ्यौँ । आन्दोलनमा हुन्थ्यौँ तर सरकारसँग हामी निरन्तर वार्तामा भएको कारणले बुझ्नुपर्छ कि हामी चुनावको बाधक होइनौँ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनबाट फर्किनुभएको छ, अब सहमति होला नि ?